Gantaalaha Biyaha - Ikkaro
Gantaalka biyaha Waa gantaal fudud oo guriga lagu sameeyo oo ku saleysan mabda'a ficil iyo falcelin. Hawlgalkeedu wuxuu ka kooban yahay oo keliya in hawada lagu shubo dhalo caag ah oo biyo leh oo marka cadaadisku aad u weynaado gantaalku waxaa la socon doona diyaarad biyo cadaadis ah.
Waxa u muuqda fudge ama toy fudud ee carruurta ayaa leh saameyn aad u weyn, maadaama ay suurtagal noqotay in la bilaabo gantaalada biyaha in ka badan 500 mitir. Xaqiiqdi waxaad xiisaynaysaa maadada.
Mabda 'ahaan tani waxay noqoneysaa boosteejo, laakiin waxaan ka helay macluumaad aad u badan oo ku saabsan Gantaalaha Biyaha o Gantaalada biyaha Waxaan go'aansaday inaan u beddelo qayb. Sidan ayaan ku soo ururin karnaa macluumaad badan.
Maalmaha soo socda ayaan soo gudbin doonnaa macluumaad.
Laba gantaal oo biyo ah
Mararka qaar waanu ka hadalnay gantaalada biyaha. Laakiin waxa aan ka tagnay maanta waa halkii ay ka shaqeyn lahayd injineernimada hawada.
Waa gantaal laba-marxaladood oo biyo ah, oo dhererkiisu gaarayo illaa 250 mitir; yaab leh.
Sawir ah gantaal si aad fikrad uga hesho waxa aan ka hadlayno.
Haa; waa dhalooyin biyo ah :)
Sida loo dhiso gantaal biyo ah
Aynu ka hadalno sida loo sameeyo gantaal biyo ah. Mabda'a hawlgalka waa mid aad u fudud, waxaa ka shaqeeya by ah mabda 'of action - falcelin hawada ku soo kordhay dhalada awgeed.
Qofka aan waligiis maqal gantaal biyo ah, waa dhalo caag ah, qeyb biyo ka buuxsan tahay, oo hawo cadaadis lagu soo rogo ka dibna loo ogolaado inay kaga baxdo god daloola oo dhalada ku sii jeedso.
Hadda ka dib, wax ka beddeliddu dhammaad ma leh, cirifka gantaalka, baalalka, baska, isha bixitaanka ama qaabka iyo tirada hawada la duray.